अगाडि पहुँच समाधान - इनडोर आउटडोर नेतृत्व भिडियो प्रदर्शन स्क्रीन निर्माता
अगाडि सेवा नेतृत्व प्रदर्शन प्रदर्शन सुविधाहरू र लाभ
>> यी शानदार एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन भिडियो मोड्युलले दुबै अगाडि र पछाडि सेवालाई अनुमति दिन्छ. तिनीहरू पूर्ण रूपमा WYSIWYG प्राप्त गर्न सक्दछन् (तपाईले के हेर्नुहुन्छ तपाईले के पाउनुहुन्छ). उदाहरण को लागी, यदि तपाईंले परम्परागत एलईडी स्क्रिनमा कुनै विफलता मोड्युल फेला पार्नुभयो, तपाईंले फन्ट मोड्युल फेला पार्न र यसलाई ठीक गर्न पछाडिको धेरै समय खर्च गर्नुपर्दछ. तर यदि तपाइँले अगाडि पहुँच LED मोड्युल प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं तुरून्त असफलता मोड्युल फेला पार्न सक्नुहुनेछ र सीधा सामनेबाट यसलाई ठीक गर्नुहोस्.
>> फ्रन्ट पहुँच डिजाइनले अगाडि साइडबाट कुनै पनि एलईडी प्यानलहरू उपलब्ध गराउँदछ, जुन केहि विशेष स्थानहरूको लागि उपयुक्त छ जहाँ पछाडि मर्मतका लागि त्यहाँ ठाउँ छैन. यसले धेरै ठाउँहरू बचत गर्न पनि मद्दत गर्दछ.
>> मोड्युल छिटो लकले यसलाई सपर सजीलो र जम्मा गर्न चाँडो बनाउँदछ & पृथक. यो केवल तपाईं लिन्छ 8 सेकेन्ड. यो संग, तपाईं धेरै समय र श्रम लागत बचाउन सक्नुहुन्छ।>> हामीले यसलाई स्मार्ट स्मार्ट हो किनकि यो छिटो असेंब्ली हो र अपडेट / अपग्रेड गर्न उपलब्ध छ. त्यो किनभने सबै क्याबिनेटहरू अनुकूलित छन् र पिक्सेल पिच मोड्युलहरूको सबै दायरा क्याबिनेट संरचनाहरूको लागि पूर्ण रूपमा उपयुक्त छन्।.